"I Don Stories" (isifinyezo) Sholokhov. "Ithole"
Ukuqala zenzeka ekhulwini lamashumi amabili kwaphawulwa zehlakalo ezimbi eRussia, umculo i- ukuphila kwabantu. Ikakhulu, waqala ngo-1918, impi yombango, okwaholela ekubeni aqhutshelwe Ukungqubuzana abantu abahlala kuleli dolobhana, umndeni efanayo zashiya izibazi emphakathini kanye nobuciko bokubeka abalobi. Iningi lazo ngokuphindiwe waphakamisa impikiswano ubudlova nobuntu. Indlela lapho indaba ephathwayo phendla abantu we mpi esabekayo usukela ngokufunda isifinyezo indaba Sholokhov "Colt".
Ukuzalwa impilo entsha
In the phakathi civil impi ngubhongoza Trofim sibhekene ukumangala ezingemnandi lonke squad, nehhotela mare. Nenkonyane, engazi kubi kanjani isikhathi, aze azalwe okokuqala sabuka nezwe elalimzungezile, futhi uzizwa usizi aba nalo lapho lokho akubona, futhi ubumnandi esingenakugwenywa okuvela uthando lukanina. Ihhashi kakhulu efanayo walala phezu engcolileyo mncane, ewuthi lokuvungula, kodwa injabulo yangempela futhi sibe nokuziqhenya ngobuzwe emehlweni akhe. Leso yisimo wabona Trofim uya ezitebeleni. Futhi eba yiqhwa ukudideka, njengoba akukho okunye kodwa indlela ukuqeda le ithole, kwakungenakwenzeka kulesi sikhathi elinezinkathazo. Lona ekuqaleni kwendaba. Ngokulandelako, cabangela amaphuzu afingqiwe.
Sholokhov kwethole lembongolo Isiphelo sakhe akukanciphi ujabule kuka Trofim. Lesi sakamuva ayelindele ingxoxo eside nge induna isigaba, okwaphumela isinqumo sokuyisebenzisa ukubulala sucker ngokushesha. Kungenjalo, ngosuku olwandulela i okuhlaselayo ngokumelene Abamhlophe, uyoba uyisicefe obuphelele, futhi ihhashi lensikazi lase ngeke asivumele leso oda yomnikazi. Trofim wayezazi isimo sase sisibi kangakanani, kodwa akazange uvuke esandleni sakhe phezu isilwane esincane futhi emsulwa. Isigaba wangena isikhundla futhi bavunyelwe ukuba ushiye kuze izinto njengoba zinjalo, bephawula lokuthi "... futhi induna oncelayo embeleni, futhi thina ukusivumela, kanye ngokwezifiso, futhi yesabatha." Ngakho Ngihlala iyunithi nenkonyane.
Sholokhov, sifinyeto iziqephu impi
kamuva ekadron Trofim kwenyanga baliqonda ne Cossack ibutho. Kwavela ukuthi ihhashi lensikazi lase lingaphansi kwelomyeni ngokuphelele imiyalelo yenkosi yakhe, ngoba okokuqala kwezithelo zonke ufuna ukuvikela cub wakhe. Inqubo uthukuthele, ngubhongoza wathumela kuye isibhamu, kodwa inhlamvu akazange balimaze noma babangele ukufa luka-mare abomvu. Ngemva kwaleso senzakalo, umlawuli waphinde wakhuluma nge Trofim phezu Ukuqedwa le ithole, njengoba kunguye kuphela esikisela uvalo phakathi kwababusi. Kodwa ukumbulala isandla wavuswa. Futhi bokudla udonse ekukhishweni oda. Ngakho uphela kwenye ingxenye indaba (ufunda isifinyezo yayo) Sholokhov.
"Ithole": Ukunqamula Eziyingozi
Ngokushesha ngemva ibutho waphoqeleka ukuba ukubhukuda yonkana Don ukubaleka Abamhlophe. Trofim ngaphambilini mare wakhe Leli qembu, umkhumbi wayephethe sehhashi. Yena akazange akhohlwe nakancane Wakhohlwa obomvu wakhe. Eduze kwalo uya "lo Simoni okusezingeni eliphezulu ephuma emanzini, khona-ke ekushoniseni ukuze emakhaleni ngokulambisa ebonakalayo" futhi cub wakhe. Futhi lapha umbhali ichaza isimo, ukwenza wonke umuntu athuthumele. Nasi isifinyezo emfushane. Sholokhov - nenkonyane ekhishwe njengoba mncane njengoba intambo kuwebhu, futhi scream nokunwetshiwe - emangazwe ukuziphatha amasosha kwamaqembu alwayo.
ucingo Wafting ashaywe Trofim inhliziyo. "Ngizokubulala!" - ukuthi kwaba umcabango wokuqala ukuthi esasenzeke yakhe. Wangenza ngiyothatha isibhamu aim at inhloko yabangamashumi kucwila ngeshwa besikhumba saleso silwane. Ngenhlanhla, ngubhongoza aphuthelwe. Khona-ke udzimelele wagxuma emanzini wahlamba kuya nenkonyane. Ngalesi sikhathi, simi ogwini futhi bebone konke isikhulu iWhite Guard wanikeza umyalo: "Ningamdubuli" Ukusebenzisa umzamo ezinkulukazi, Trofim etholeni wadonsa ogwini, lapho yokugcina masinyane bawa ngaphansi kwesivikelo likanina abomvu.
Futhi Trofim ngokuntenga ezinyaweni zakhe. Kodwa akuzange kumhambele izinyathelo ezimbili, ngazizwa ngifana shot ashisayo, ngokungazelelwe abamhlaba esifubeni sakhe. Kuyinto ibhange kwesokudla, ne nandaba ngokuchofoza yokushutha, esingu iWhite Guard isikhulu. Ngakho uphela indaba (ufunda isifinyezo yakhe) Sholokhov "Colt".
Victoria Ivanova futhi imihlaba wakhe
"Angiyithandi indida yakho ...": ukuhlaziya inkondlo NA Nekrasov
Umlando kokudaliweyo "U-Inspector General" by Gogol
Mamaeva Nadezhda: ejwayelekile zesifazane zenganekwane amanoveli
Uhlaziyo emfushane "le Petersburg izindaba" Gogol
Vaginosis ukwelashwa izidakamizwa "Ekofemin". Amazwana isicelo
Aminoacetic acid- ukubaluleka kwayo engenakulinganiswa ingeyomzimba.
Ukukhetha ukwahlukanisa for iminyango
Impersonator futhi umlingisi Viktor Chistyakov: Biography, lokusungula
Bagels. Indlela elula kungakhathaliseki izithako
U-Emily Didonato ungumbusi osemusha
Yamathenda cottage shizi ukugcwaliswa for pancake
ECambria ubumba: Izici kanye nokubuyekeza
Indlela ukwandisa ifonti ekhasini emizuzwaneni embalwa
Syndrome Premenstrual, ukuxilongwa kanye nokwelashwa
Lezi imihlobiso kuzokuvumela ukuba baphathe ucezu inganekwane zakho ozithandayo yezinganekwane
Emadolobheni Czech nibaluleke kokubona